Gini mere eji eme ka okporo osisi magnetik nke uwa gbanwee? | Netwọk Mgbasa Ozi
Planetwa anyị anaghị adị ka ọ dị ugbu a. N’ime ọtụtụ ijeri afọ kemgbe e guzobere ụwa, enweela glaciations, ikpochapu, mgbanwe, mgbanwe, usoro okirikiri, wdg. A naghị edozi ya etu ọ bụla.
Otu n'ime ihe ndị gbanwere na na adịghị ka nke a na ndụ anyị niile bụ Earth magnetik pole. Ihe dị ka afọ 41.000 gara aga, hadwa nwere polarity gbanwere, ya bu, mgbago ugwu di na ndida ya na uzo ozo. You chọrọ ịma ihe kpatara nke a na otu ndị sayensị si amata ya?
1 Ntughari na uzo magnet nke uwa
2 Enwere ụdị ọhụrụ nke ụwa?
Ntughari na uzo magnet nke uwa
N’akụkọ ihe mere eme nile nke ụwa, mgbanwe na okporo osisi ndọta emewo ugboro ugboro, na-adịgide ọtụtụ narị puku afọ. Iji mara nke a, ndị ọkà mmụta sayensị na-adabere na ule mineral na-anabata ihe ndị magnetik. Nke ahụ bụ, site n’inyocha nhazi nke mineral magnet, ọ ga-ekwe omume ịmata nghazi nke oghere ndọta ụwa nwere ọtụtụ nde afọ gara aga.
Ma, ọ bụ agaghịkwa naanị mkpa na-egosi na'swa magnetik okporo osisi agbanweela kemgbe akụkọ ihe mere eme, ma ihe mere ha mere. Ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtala Nnukwu oriọna ndị nwere ọkwá ndị na-etolite site n'oge ruo n'oge na-ada n'ime ụwa anyị. Omume nke nkume ndị a nwere ike ibute mgbanwe na mkpanaka ụwa ma mee ka ha tụgharịa. Iji chọta nke a, ndị sayensị ahụ mere ka ihe ọmụmụ ha dabere n’ihe mgbaàmà ụfọdụ nke ala ọma jijiji ndị na-ebibi ụwa.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na nsọtụ etiti ụwa enwere ọnọdụ okpomọkụ nke 4000 Celsius C nke mere na okwute ahụ siri ike jiri nwayọ na-aga ọtụtụ nde afọ. Ihe a na-eme na uwe a na-eme ka kọntinent ahụ gbanwee ma gbanwee ọdịdị. N'ihi ígwè a kpụrụ ma kwadobe ya n'ime ụwa, ụwa na-ejigide ebe ndọta ya na-echebe anyị site na radieshon nke anyanwụ.
Nanị ụzọ ndị sayensị ga-esi amata akụkụ ụwa a bụ site na ịmụ akara ala ọma jijiji nke ala ọma jijiji na-eme. Na ozi nke ọsọ na ike nke ala ọma jijiji ahụ na ebili mmiri ha nwere ike ịmata ihe anyị nwere n'okpuru ụkwụ anyị na ihe mejupụtara.
Enwere ụdị ọhụrụ nke ụwa?
Site n'ụzọ a nke ịmụ itwa a ga-esi mata na enwere mpaghara abụọ buru ibu n'akụkụ elu nke ụwa ebe ebili mmiri na-ejegharị nwayọ. Mpaghara ndị a dị ezigbo mkpa na usoro otu ha si emetụta ike ọrụ niile, na mgbakwunye na nhazi ụzọ isi jụrụ oyi.
N'ihi ala ọma jijiji kachasị ike na iri afọ ndị gara aga ndị na-ekwe omume na-amụ nke ndị a mmiri na ebili mmiri na-aga site na ókè-ala n'etiti isi na'swa uwe mgbokwasị. Nchọpụta kachasị na nso nso a na mpaghara ndị a nke ime ụwa na-egosi etu akụkụ dị ala nke isi ahụ siri nwee nnukwu njupụta (yabụ akụkụ ala) na akụkụ elu oke njupụta. Nke a na-egosi ihe dị ezigbo mkpa. Ma ọ bụ na ihe ndị ahụ na-abawanye n’elu ala, ya bụ, ha na-aga n’elu.
Mpaghara nwere ike ịdị obere karịa naanị n'ihi na ha dị ọkụ. Dika otutu ikuku (nke kachasi elu karie), ihe yiri nke a na eme n'ime akwa na isi nke uwa. Agbanyeghị, ọ nwere ike ịbụ na kemịkal mejupụtara mantle akụkụ na-akpa agwa dị ka tụlee nke lava oriọna. Nke ahụ pụtara, na mbụ ha na-ekpo ọkụ ma na-ebili na ha. Ozugbo elu, na-enweghị kọntaktị ya na isi ụwa, ọ na-amalite ịjụ oyi ma dịkwuo oke, yabụ jiri nwayọ na-agbadata na isi.
Omume a dị ka oriọna oriọna ga-agbanwe ụzọ ndị sayensị si kọwaa mmịpụta nke okpomọkụ sitere na isi. Na mgbakwunye, ọ nwere ike zuru oke ịkọwa ihe kpatara ya, n'akụkọ ihe mere eme nke ụwa, a na-agbanwe okporo osisi magnetik.
Full ọmụmụ: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X15000345
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Gini mere eji eme ka okporo osisi magnetik nke uwa gbanwee?